Yakatumirwa ne Tranquillus | Apr 18, 2020 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Parizvino, kupfuura zvakajairwa, uri kushandisa nguva yako kutumira uye kugamuchira marudzi ese e tsamba. Iwe unowanzo kupedzisa mameseji ako ne "Kurevesa," "zvakanakisa" kana zvimwe "zvakanakisa". Hauna hazvo kuronga D 'nyora email kuna tenzi wako. Asi kunyangwe newaunoshanda navo kana newako maneja. Iwe unoda kuchinja uye kuwedzera zvishoma zvinyoro nyowani mune polite foromani iwe yaunoshandisa kumagumo eemail. Kusarudza kunze kweshoko rechinyakare kupedzisa meseji kunowedzera simba. Asi zvirokwazvo kushandisa izwi risina kukodzera kana chidimbu cheSMS mhando kunogona kutungamira rwendo rwemugwagwa. Iwe haugone kunyorera chero munhu. Kunyanya mune iyo nyanzvi yenyika.
Makumi mana emakumi mana emafomu ekuremekedza kuti asanganisira kumagumo eemail.
Heano makumi mana nemakumi mana mienzaniso yemaitiro ane hunhu aunogona kushandisa kupedzisa emaimeri ako muchitaera. Ndiri kureva tsamba kwete tsamba. Ukasarudza kutumira tsamba neemail. Ratidza pachena mumuviri weshoko rako kuvepo kwegwaro, CV kana tsamba yekuvhavha semuenzaniso. Chero zviyero zvegwaro raunenge wakasanganisira sechibatanidzwa. Kana iri tsamba, ichaguma nemutsara wakadzikama.
Nekuremekedzwa kwose kwakakodzera,
Shamwari dzangu dzese,
Gamuchidza kwaziso dzangu dzemwoyo wose
Iva nezuva rakanaka,
Kutanga zvakanaka kusvika pasvondo,
Iva nevhiki yakanaka,
Noushamwari hwangu hwese,
Nesimba rangu rese.
Nenyasha dzangu dzese,
Mirira kudzoka kwako,
Kutarisira kushandira pamwe,
Kuramba uine chako,
Ndinoshuva kuti dai ndakakuzivisai zvinoshanda,
Mune tariro yekukubatsira,
Nekufunga kwangu kose,
Tokuona gare gare,
Mirira mhinduro yako,
Ndatenda nekutarisa kwako,
VERENGA Imeyiri template yekukumbira kweshoko
Classic neruremekedzo mafomasi ekuisa mune ako ese tsamba
Ndokumbira gamuchirai, Madam, Changamire, kuratidzira kweruremekedzo rwangu rukuru.
Ndokumbira gamuchirai, Madam, Changamire, kuratidzira kwemanzwiro angu ane ruremekedzo.
Ndokumbira kuti mutende, mudikani changamire, mune wangu ane moyo munyoro uye anoremekedza.
Ndokumbira mugamuchire, Madam, Changamire, kukwazisa kwangu neruremekedzo.
Ndokumbira mugamuchire, Changamire, ruremekedzo rwangu rwakadzama.
Ndapota gamuchirai, Changamire, iyo simbiso yekuremekedza kwangu kwakadzama.
Gamuchirwa, Madam, Changamire, kukwazisa kwangu kwekuremekedza.
Gamuchirwa, Madam, Changamire, kwaziso dzangu dzemwoyo wose.
Ndokumbira gamuchirai, Madam, Changamire, angu akanaka zvandinofarira.
Ndokumbira gamuchira, Madam, Changamire, vimbiso yekufunga kwangu kukuru.
Gamuchirwa, Madam, Changamire, zvandinofarira zvikuru.
Ndokumbira gamuchira, Madam, Changamire, kuratidzira kwemanzwiro edu ane ruremekedzo uye akazvipira.
Ndokumbira gamuchira, Madam, Changamire, kuratidza kwemanzwiro edu akazvipira kwazvo.
Nematare angu ane ruremekedzo, ndapota gamuchirai, Madam, Changamire, kutaura kwekufunga kwangu kwakasarudzika.
Ndichimirira chibvumirano chako, ndapota gamuchira, Madam, changamire, zvandinofarira zvikuru.
Kana iwe uri kufarira chirongwa, ngatisangane. Ndokumbira mugamuchire, Madam, Changamire, kukwazisa kwangu neruremekedzo.
Ndichimirira mhinduro yako, ndapota gamuchira, Madam, Changamire, kukwazisa kwangu kwemoyo wose.
Ndichimirira mhinduro kubva kwauri, ndinokukumbira, Madam, Changamire kuti muve netsitsi dzakakwana kugamuchira kukwazisa kwangu kweruremekedzo.
Mune maonero aya, ndingatende, Madam, Changamire, kugamuchira kukwazisa kwangu kweruremekedzo.
Ndichimirira mhinduro yandinotarisira kuve yakanaka, ndinokumbira kuti mugamuchire, Madam, Changamire, moyo wangu wakanaka.
VERENGA Siya bhizinesi kutanga-kumusoro, yemahara kunyorera tsamba template
Mhando yepamusoro yekuremekedza maemail ako July 25th, 2021Tranquillus
pashureChirevo che chiitiko, chishandiso chakakosha chekuzivisa basa rako.
zvinoteveraGadza bhokisi rako rebhokisi sebhokisi remumhanzi